Soo Saaraha Xashiishadda Aphria Dhisida Meel Kali Kali ah ee EU • Daroogada Inc.eu
CC Pharma, oo ah shirkad hoosaad ka ah Aphria iyo qeybta qeybinta qeybinta Yurub, ayaa heshiis sahay la gashay shirkadda Materia Deutschland. Heshiiska, CC Pharma wuxuu ku qaybin doonaa alaabada ubaxa Aphria iyada oo loo marayo shabakadda Materia Deutschland ee Jarmalka.
Materia waa shirkad xashiishad caafimaad ah iyo fayoqab oo diiradda saareysa ballaarinta faylalka ay ka kooban tahay daawooyinka loo soo bandhigo farmashiyeyaasha EU (gaar ahaan Jarmalka).
Sida ku xusan qodobada heshiiska, CC Pharma ayaa soo dajin doonta badeecada oo waxay ku sii deyn doontaa qaybo badan, iyadoo Materia Deutschland ay mas'uul ka tahay iibinta iyo howlgelinta farmashiyaasha.
Ku darida ubaxa Aphria qeybta materia Deutschland ee alaabada xashiishka waxay wanaajineysaa kala duwanaanta alaabada xashiishka la siiyo macaamiisha. Waxay kordhisaa saamiga suuqa ee Jarmalka. Toddobaadyada soo socda, Materia waxay bilaabi doontaa qaybinta iyo ka iibinta alaabada Aphria ee farmasiyada.
Kobaca soosaaraha xashiishka ee Yurub iyo Kanada
CC Pharma waa shirkad gebi ahaanba iska leh Aphria waxayna u shaqeysaa sida shirkadda qeybinta EU. Heshiiskan sahayda ah, Aphria waxay qaadeysaa talaabooyin wanaagsan Yurub. Aphria waxay horay u shaacisay inay ku biirtay shirkada weyn ee Tilray Inc. (TLRY), kana dhigaysa shirkadda ugu weyn xashiishka adduunka hal mar oo keliya. Maaddaama ay yihiin shirkado madax-bannaan, Aphria iyo Tilray labaduba si fiican ayey u taagan yihiin inay ka faa'iideystaan ​​suuqa xashiishka ee Yurub. Ka dib markii la isku daro, ka dib markii la isku daro, shirkada isku dhafan ayaa sameyn doonta inta badan saamiga suuqa Midowga Yurub iyo warshadaha caafimaadka iyo madadaalada sharciga ee Kanada.
Tilray wuxuu ka shaqeeyaa xarun casri ah oo EU GMP ah oo ku taalo dalka Boortaqiiska waxaanan fileynaa in xaruntani ay noqon doonto wadaha ugu weyn ee kobaca shirkada isku dhafan. Marka la iibsigu dhammaado, shirkaddu waxay rajeyneysaa inay soo daabacdo koror ballaaran oo ku saabsan iibka ka imanaya suuqa xashiishka ee EU.
saamiyadaCanadacannabiskaydka xashiishkaEuropamaaliyad ahaan
Tababaraha Weed Brendan Kennedy wuxuu ku kasbaday $ 256 ee 2018
In kasta oo adduunka intiisa kale wali 'lagu kala fogaado' heesta caanka ah ee 'Eurovision Song Contest song Arcade ...